EOS na-enye gị ohere ịme ihe nhazi ihe oyiyi na ihe nchọgharị ahụ - Geofumadas
EOS na-enye gị ohere ime ihe nhazi ihe oyiyi na ihe nchọgharị ahụ
June, 2018 Cartografia, Geospatial - GIS
Imirikiti ọrụ nyocha ihe onyonyo nke Erdas Imagine ma ọ bụ sọftụwia ENVI bụ ugbu a n'ịntanetị maka EOS Platform. Ọrụ igwe ojii ọhụrụ a sitere na nyocha nke EOS data na ndị ọkachamara GIS bụ usoro zuru oke maka ọchụchọ, nyocha, nchekwa na ọhụụ nke nnukwu geospatial buru ibu.
Site na EOS Platform, ị ga-enweta ihe elektrik nke ngwaahịa EOS anọ na-emeju ibe ha ma nye ezigbo ngwá ọrụ maka ndị nyocha geospatial.
A na-echekwa data onyonyo Nchekwa EOS igwe ojii wee dị maka nhazi ihe oyiyi ma ọ bụ nyocha nyocha nke dịpụrụ adịpụ n'oge ọ bụla; nke a nwere ike ịbụ faịlụ ọrụ aka adịgboroja, onyonyo enwetara site na LandViewer ma ọ bụ faịlụ mmepụta Nhazi EOS.
E nwere opekata mpe ihe abụọ kpatara iji dozie eserese bụ ebumnuche kachasị nke ikpo okwu: nhazi nke nnukwu ọnụọgụ data na-aga n'ịntanetị ma na-enye ndị ọrụ 16 arụ ọrụ yana ọtụtụ ndị ọzọ n'ụzọ adịghị anya. Na mgbakwunye, ndị ọrụ nwere ike ịnweta atụmatụ kachasị mma nke eserese nke Ọhụụ EOS maka ilele anya na data nke vector na, dika ekwuputara maka ọdịnihu, nyocha ya.
Agnostic data nyiwe
A bịa na data rasterized, ị nwere ike iji ọtụtụ satịlaịtị na data igwe na-arụ ọrụ na LandViewer, EOS Nhazi na Nchekwa EOS. Na mgbakwunye, ndị ọrụ nwekwara ike bulite faịlụ GeoTiff, JPEG, JPEG 2000 ma tinye algorithms nhazi GIS site na API ma ọ bụ na ntanetị weebụ. EOS Vision bụ ngwá ọrụ gị maka arụmọrụ data nyochaworo site na nkwado maka ọtụtụ usoro (ESRI Shapefile, GeoJSON, KML, KMZ).
Ihe ngwugwu zuru ezu maka nhazi ihe oyiyi
Nhazi EOS na-enye ahụmịhe dị ukwuu na nhazi ọrụ ya nke 16 na-arụ ọrụ, gụnyere akụrụngwa atụmatụ a ma ama (njigide, nkọcha, nchụpụ), nyocha ihe nlere anya, eserese na njirimara njiripụta nke algorithms na-enweghị ike ịchọta ebe ọ bụla ọzọ. Kwadebe data gị maka nyocha LiDAR na-abịanụ na ịme ngosipụta 3D dị ka ha ga-adị n'oge na-adịghị anya.
Ihe mgbochi dị ka nchọpụta igwe ojii ma ọ bụ nhazi ụda redio ga - enyere gị aka imezigharị akụrụngwa maka nyocha n'ọdịnihu: ị nwere ike idozi ihe onyonyo dabere na mmetụta ikuku ma nweta ezigbo ụkpụrụ nke nchapụta ma ọ bụ ngosipụta nke ala.
Nchọpụta ihe, nchọpụta mgbanwe na nhazi ọkwa
Netiyo di gburugburu, nke EOS meburu ka ọ wepu njirimara nke onyonyo a, na-enye gị ohere itinye ụzọ isi were chọpụta ihe na-aghọrọ mgbanwe site na mbara.
Nanị inwe ọtụtụ ihe onyoonyo na ihe na-achọpụta mgbanwe ịkpa oke, ị nwere ike soro otu oke igbukpọ iwu na-ezighi ezi na-aga n'ihu n'oge.
Nchọpụta dị n'akụkụ nwere ike igosi oke ala nke ala ubi gị ruo mgbe pixel ikpeazụ.
Ọ ga-ekwe omume tụọ okporo ụzọ na-adọba ụgbọala nke nnukwu ụlọ ahịa buru ibu site na nchọpụta nchọpụta ụgbọ ala.
Nyocha kachasị mma
Ngwa ahia EOS Platform dakọtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ihe mmetụta dịpụrụ adịpụ na onye ọrụ nwere ike ịhọrọ site na ndepụta nke ndepụta ntanetị ogologo iji gbakọọ na ofufe. Na mgbakwunye na setịpụrụ ahịhịa zuru ezu (NDVI, ReCI, ARVI, SAVI, AVI, wdg), enwere ntụle iji kọwaa njirimara nke odida obodo (mmiri, snow na ice, NDWI, NDSI), yana ebe ọkụ (NBR) ). Ihe kachasị mma bụ na inwere onwe gị iji nwalee ụdị ọhụụ na ị nwere ike ịmepụta ihe nkwakọdoro ọfụma dabara adaba maka mkpa gị.
Hazie ma nyocha
Ihe ngosi EOS nhazi ihe di nfe na-eme ka odi nfe ijikwa nhazi oru oru dabere na udiri azumahia nke onye oru. You nwere ike ịtọ usoro maka nhazi ma jiri ọrụ ọrụ a ugboro ugboro iji rụzie ọrụ nyocha ihe dị elu. Mmelite na-abịanụ ga-agbakwunye atụmatụ nke ịmepụta algọridim omenala site na arụmọrụ nhazi data dị.
Ugbo, ohia, manu na manu na ndi ozo
Ihe ojoo nke ahia EOS na-enye uzo nke ihe nile di nkpa maka ndi mmadu, ulo oru na ndi otu aka.
Site na njiripụta ahịhịa na njiri mara ihe ọkụkụ, ndị na-ahụ maka mmiri nwere ike ịga n'ihu nyochaa ọnọdụ ọkụkụ iji chọpụta ọrịa na ahịhịa, ahịhịa ma ọ bụ ụkọ mmiri. Ọkachamara oke ohia nwere ike itule mbibi nke oke oku, lelee ọnọdụ oke ohia ma ọ bụ manye mmachi ịkpa ike.
EOS Platform bụ nnukwu nhọrọ maka nhazi mpaghara na ime obodo, ebe ọ na - enyere ndị ọrụ aka ịmata klaasị mkpuchi ala iji mepụta maapụ ahịhịa. Na mgbakwunye, ị nwere ike mepụta atụmatụ zuru ezu nke atụmatụ obodo mepere emepe dịka ụlọ, okporo ụzọ na ihe ndị ọzọ dị mkpa na mpaghara.
Ikpo okwu nwere ike ijikwa nchịkwa ọdachi site na ị tụta oke ide mmiri ma ọ bụ ịchọpụta oke ọkụ. N'iburu n'uche mmanụ na gas, ọ na-enwe ike ịchọpụta mmanụ mmanụ ma chọpụta mmetụta gburugburu ebe obibi.
Nchịkọta data EOS na-eji ọrụ sitere na igwe ojii chere ihu vetikal dị iche iche na otu ikpo okwu, na nyocha sayensị gosipụtara, na-akwado ma mepụta ngwaahịa ndị nwere ike ịgbakwunye uru na ntanetịpụta ihe dịpụrụ adịpụ iji nye nsonaazụ ọkachamara maka azụmahịa gị.
Jiri ngwa EOS Platọ rụọ ọrụ nke ihe nrịba ama nke ụwa, ozugbo na ihe nchọgharị gị: https://eos.com/platform
Previous Post«Previous ArCADia BIM - Nhọrọ iji weghachite
Next Post Ndị na-esochi onyinye afọ aNext »
Otu nzaghachi "EOS na-enye gị ohere ịme ihe nhazi ihe oyiyi na ihe nchọgharị ahụ"
Lorraine kwuru, sị:
September, 2018 na
Ihe omuma a bara m ezigbo uru! Daalụ
Agụmakwụkwọ Sayensị - Mụta na Python, Plotly na mpempe akwụkwọ
Ugbu a enwere ọtụtụ ndị nwere mmasị na ọgwụgwọ nnukwu data iji kọwaa ma ọ bụ mee mkpebi ziri ezi na ihe niile ...